Thursday June 21, 2018 - 16:20:34 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha wadanka Turkumanestaan Qurbaan Qooli Berdi Muxamadov ayaa saxiixay sharci ka mamnuucaya ragga wadankaas in ay guursan karaan wax ka badan hal haween ah.
ragga muslimiinta ah ayay ubanaantahay in ay guursadaan 4 xaas
Madaxweynaha wadanka Tukumanistaan Qurbaan Qooli Berdi Muxamadov ayaa saxiixay sharci ka mamnuucaya ragga wadankaas in ay guursan karaan wax ka badan hal haween ah.
Xukuumadda ka jirta Wadankaas Turkumanistaan ayaa ah xukuumad Cilmaani ah balse inta ugu badan shacabka ku dhaqan wadankaas waa Muslimiin.
Xeerkan uu saxiixay madaxweynaha wadankaas ayaa ka hor imaanaya xeer hore oo looga dhaqmi jiray wadankaas tan iyo sanadkii 1993-dii xilligaas oo wadanka Turkumunistaan uu madax banaanidiisa ka qaatay midowgii sofiyeeti ee burburay, xeerkaas oo ragga Muslimiinta ah u ogolaanayay inay afar dumar guursan karaan.
Madaxweynihii wadanka ee xilligaas Sabar muraad Niyaasoof ayaa ku tilmaamay xeerkaas inuu ahaa mid dhaqan soo jireena u ahaa shacabka Turkumaanka wuxuuna ku baaqay in wadanka looga dhaqmo sidaasi.
Sawirka Madaxweynaha gaaloobay ee dalka Turkumestaan
Balse waxa loogu yeero xeerka qoyska oo wadankaas laga hirgeliyay sanadkii 2012 ayaa lagu sheegay in wadanka ay mamnuuc ka tahay in raggu ay guursan karaan wax ka badan hal dumar ah, nin walba oo arrinkaas lagu helana uu mutaysan doono laba sano oo xarig ah ama ganaax lacageed oo aad u fara badan.
Haseyeeshee saddex maalin ka hor ayuu madaxweynaha wadankaas Qurbaan Qooli waxaa uu si rasmi ah u saxiixay in ay dambi tahay in ragga wadankaas ay guursadaan wax ka badan hal haween ah.
Sharci gaaleedkaas cusub ayaa dhaqan gelaya 1-da saptember ee sanadkaan aan ku jirno ee 2018.
Inta badan wadamada Muslimiintu ay leeyihiin ayaa waxaa ka taliya madax Murtadiin ah kuwaas oo si aan gabasho lahayn uga horyimaada nusuusta sharciga ah ee kusoo aroortay Qur'aanka iyo Sunnada Nabiga SCW.
Madaxdaas murtadiinta ah oo iyagu inta badan sheegta in ay Muslimiin yihiin ayaa dhanka kale dagaal toos ah iyo mid dadban kula jira Axkaamta shareecada Islaamka, iyagoona degsada xeerar u gaar ah oo ay ku maamulaan dadka Muslimiinta ah ee ay xoogga ku haystaan.
Wadanka Tuunis ee dhaca mandiqadda Maqribul islaam ee waqooyiga qaaradda Afrika waxaa kajira xeer midkaan lamid ah oo soo bilaawday xilligii uu madaxweynaha ahaa xabiib Boorqiiba illaa iyo haddana ragga waa ka mamnuuc in ay guursadaan afar xaas taas oo keentay in dumar badan ay gaboobaan iyagoo aan guursan.
Daraasad dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in 60% dumarka dalka Tuunis ay gaboobaan iyagoo gabdho aan guursan halka 20% ay yihiin kuwa doobab ah, warbixinta ayaa saadaalisay in marka lagaaro sanadda 2050 ay dadka Tuunis ku dhaqan noqonaan kuwa gaboow ah waxaana ku yaraan doona dhalinyarada sababa laxiriira dhalmada oo aad ugu yar.